ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | Open Development Myanmar
မြန်မာနှင့် လာအိုနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရေလွှမ်းမိုးမူ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လှုဒါန်းမူ့များအား တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်။ ဤပုံကို နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့၊ Flickr တို့မှ ရိုက်ယူ ထားပြီး CC BY-NC-ND 2.0 လိုင်စဉ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မူ့ သည် မြန််မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန် အပါအဝင် မဟာမဲခေါင် ဒေသအတွင်းတွင် ရာစုနှစ် များနှင့်ချီကာ တရားဝင်မဟုတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပျက်နေခြင်းဖြစ်သည်။1
သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များအရ ယခင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ဒေသမှ လက်ရှိနေမြဲ ဒေသသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာသူ (၅၃) ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျား/မ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးအတွက် ရွှေ့ပြောင်း ရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများများမှာ မိသားစုနောက်လိုက် သဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းမူ့ နှင့် အလုပ်ကြောင့်/ အလုပ်ရှာရန် ရွှေ့ပြောင်းမူ့ တို့ ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုနောက်လိုက် သဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းမူ့တွင် အမျိုးသား (၃၂%) ထက် အမျိုးသမီး များ (၄၉%) တွင် ပိုမို မြင့်မားပြီး အလုပ်ကြောင့်/ အလုပ်ရှာရန် အတွက် ရွှေ့ပြောင်းမူ့တွင် အမျိုးသားများ (၄၇%) က အမျိုးသမီး (၂၃%) ထက် ပိုများကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။2
နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြချက်များ အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်များ အကြား ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မူ့သည် နည်းပါး ပြီ ပြည်နယ်တစ်ခုခြင်း စီတွင် နေထိုင်သူ ဦးရေ၏ အချိုးအစားကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာ ၁၉၇၃ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခဲ့ပြီး ကတည်းကနှင့် အမှန် စင်စစ်အနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲသွား ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မူ့ အများဆုံး တိုးလာခဲ့ပြီး ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ဦးရေမှာ လူဦးရေ၏ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါတွင် ၁၄.၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်မူ့ များ သည် ရန်ကုန်အား မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အချက်အခြာအဖြစ် အရေးပါ စေရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။3
၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်များအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ လူများ၏ ၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း သာလျှင် ယင်းတို့၏ မူလနေထိုင်ရာ နေရာမှ အခြား မြို့နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ လူဦးရေ၏ ၁၃.၅ ရာခိုင်နှုန်း သည် သူတို့ တသက်တာတွင် မူလနေထိုင်ရာမှ အခြား မြို့ရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။၂ ယင်း အချိုး အစား သည် ကျေးလက်ဒေသများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြို့ပြတွင် လက်ရှိ နေထိုင်သူများတွင် ပိုမိုမြင့်မားလျှက်ရှိ ပါသည်။ ရန်ကုန်တွင် လက်ရှိနေထိုင်သူများ၏ ၄၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အခြား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး တို့မှ ပြောင်းရွှေ့လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။4
၅၃ ရာခိုင်နှုန်းသော လူများသည် ယင်းတို့၏ မိသားစု ပြောင်းရွှေ့မူ့နောက် လိုက်ပါရခြင်းကြောင့် မူလနေထိုင်ရာဒေသ မှ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မူ့တွင် တတိယ အများဆုံး မှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခြင်းဖြစ်သည်။ လူအများစု ရန်ကုန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းရခြင်း မှာ အလုပ် အကိုင် အခွင့်ရရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်။5
၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော လူများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် ရရန်် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယင်းတို့၏ နေထိုင်ရာ အရပ်အား ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် အလုပ်ရှာရန်် သို့ မဟုတ် အလုပ်သစ် တစ်ခု ရရန် ပြောင်းရွှေ့လာ ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များ အရ မြန််မာနိုင်ငံမှ လူဦးရေ နှစ်သန်းကျော်မှာ နိုင်ငံခြားတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိပြီး ထိုထဲမှ ၇၆.၈% ရာခိုင်နှုန်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ နောက်ထပ် အများဆုံး သွားရောက်သည့် နေရာမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး (၇.၄) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စင်္ကာပူ တွင် (၅.၁) ရာခိုင်နှုန်း နေထိုင်ကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံခြားတွင် ရောက်ရှိနေထိုင် သူများအနက် ထိုင်းနိုင်ငံ ရှိ အမျိုးသမီး ဦးရေမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ ရှိ အမျိုးသား ဦးရေ ထက် ပိုမိုများပြားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။6
နိုင်ငံခြားသို့ ရောက်ရှိနေသူများအနက် (၁.၇) သန်းခန့်မှာ အသက် (၁၅-၃၉) အတွင်းဖြစ်ပြီး (၈၃) ရာခိုင်နှုန််းခန့် ရှိကာ အဆိုပါ ဦးရေတွင်် (၁.၁) သန်းသည် အမျိုးသား များ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။7
မြန်မာနိုင်ငံ မှ ထိုင်းနိုင်ငံထဲသို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မူ့ မြင့်မားစေသည့် အကြောင်းများတွင် နိုင်ငံရေး၊ လူမူ့ရေးနှင့် စီးပွားရေးအရ တွန်းအားပေး မူ့ အချက်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား စီးဆင်းမူ့၏ နောက်ကွယ်မှ အဓိက မောင်းနှင်ချက် မှာ စီးပွားရေးကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများမှာ အများစုမှာ အလုပ်ရှာဖွေရန််နှင့် လုပ်အားလစာ ပိုမို ရရှိရန် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်သည်။ 8
Asian Research Center for Migration (ARCM) ၏လေ့လာချက် အရ၊ ဥပမာ အားဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အယောက် ၁၀၀ တွင် (ဂ၀) မှာ ယင်းတို့ နေရပ်တွင် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း သည် ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမူ့ရေး ပဋိပက္ခ များနှင့် ပြည်တွင်း ပြောင်းရွှေ့သူ အများအပြား (အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု) များသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း စီးဆင်းမူ့ ပုံဖော်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္႑ မှ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။9
လူ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အလုပ်ရှာရန်အတွက် ဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အတွက် ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အလုပ်ပြောင်းရွှေ့မူ့ကြောင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံခြားတွင်း သွားရောက်နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည်။ အဆိုပါ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အလုပ်ရှာရန် အတွက် နှင့် ၂၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အလုပ်လုပ်ရန် သွားရောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အခြား (၁) ရာခိုင်နှုန်းမှာ မိသာစု ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ကြောင့် လိုက်ပါပြောင်းရွှေ့ သူများ ဖြစ်သည်။10
1. Labor Migration in the Greater Mekong Sub-region (pdf) https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/labor-migration-in-the-greater-mekong-sub-region-synthesis-report-phase-1
2. The 2014 Myanmar Population and Housing Census: The Union Report: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/myanmar-census-2014?type=dataset
3. The Economist Intelligence Unit http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1983218582&Country=Myanmar&topic=Economy
4. Myanmar labour force, child labour and school to work transition survey 2015 https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/myanmar-labour-force-child-labour-and-school-to-work-transition-survey-2015-executive-summary-repor
5. The 2014 Myanmar Population and Housing Census: The Union Report: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/myanmar-census-2014?type=dataset
8. Myanmar labour force, child labour and school to work transition survey 2015 https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/myanmar-labour-force-child-labour-and-school-to-work-transition-survey-2015-executive-summary-repor
9. Labor Migration in the Greater Mekong Sub-region (pdf) https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/labor-migration-in-the-greater-mekong-sub-region-synthesis-report-phase-1
10. Myanmar labour force, child labour and school to work transition survey 2015 https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/myanmar-labour-force-child-labour-and-school-to-work-transition-survey-2015-executive-summary-repor